Ukusho ukuthi kungcono ukuba enempilo, abacebile bajabule ngaphandle abampofu, abagulayo nowokuhawukelwa, kubonakala umuntu ezihlekisayo. Phela, kuyacaca ukuthi wonke, ngaphandle kokukhetha! Nokho, lo mbuzo: "Yini imali ayinakukuthenga?" uvalwe exhumene lokhu kuhlakanipha abantu ...
Imali ayikona injabulo?
Ake sithi, phambi komuntu lizobhekana umsebenzi ukukhetha nje into eyodwa: impilo enhle, injabulo noma imali. Kuyini ukuyeka abakhethe? Ukuze ibe nempilo, kodwa impofu futhi ilusizi - mhlawumbe kungaba umgomo iphupho? Noma lokhu: Ingabe kungenzeka ukuba sijabule, ehlala kudoti, lapho ikhanda ivimbekile efuna isinkwa, lapho esonta imilenze Ukuvuvukala Kwamalunga ayidabule emaphashini ukhwehlela?
Kodwa nemali - imali eningi! - akunakwenzeka ukuba ulethe injabulo kanjani lapho efelwa ingane, okuyinto, ngeshwa, uku kungekho indlela ukusiza egumbini emuva. Imali ngeke kukusize Kuleso simo, uma omunye wakho othandekayo uthukutheliswe emshadweni nomuntu bengafaneleki, kodwa akafuni ukushintsha indlela yabo yokuphila. Ngokuba lokho akusizi, futhi lapho unomuzwa wokuthi ukuphila is wahlala ngeze, futhi kwelanga ususondele. Futhi ngakho kuba nokuthuka ukwazi ukuthi lokho kufana futhi konke, futhi kuziwa izikhathi ngokuzumayo nzima - futhi kukhona eduze kungekho ongashadile, uyakwazi ukuqonda, uzwela usizo.
Ngakho, ephendula umbuzo ngalokho imali ayinakukuthenga, angabizwa ngokuthi uthando, ubungani, izinkumbulo, isikhathi, impilo enhle, injabulo - siqu sakhe kanye nabathandekayo.
Impilo kanye nemali
Kuthiwa impilo akunakuthengwa ngemali. Kodwa kwezinye izimo zinjalo isici kokunquma, kungakhathaliseki enempilo noma ngabanye. Futhi uma kukhona lemali edingekile ngisho okuthile ungamumbi izinyo ezimbi, ungakhuluma mayelana nenjabulo?
Ayikho uthando olungenamkhawulo kanye nobungane bakhe obuqotho kakhulu akakwazi balahle ubuhlungu okuthena amandla. Kodwa inani wamazinyo encane ikhokhwe kushintsha izimpilo. Ngakho ukuphendula umbuzo othi "yini imali ayinakukuthenga", awukwazi zibhekisele impilo ecacile, ngoba ngokuvamile kuba ukuntuleka ezezimali kuholela ukulahlekelwa kwayo.
Tshela othile ababephila ngesikhathi sakhe, ukuthi ngeke ukwazi ukuthenga uthando ngemali. Wena ukuhleka ebusweni! Bese bekhulisa njengesibonelo izitatimende, owawuthi uthando - kungcono isilo, njalo efuna ukuphuca ukudla. Lokhu kumele aqondwe njengokufaka isiqinisekiso ukuthi lo muzwa zishintsha futhi impermanent. Uzokutshela ukuthi ngisho kakhulu uthando oluqotho izophela, uma okhethiwe noma nengoduso ayisekho ukufakazela imizwa yabo ngale ndaba. Futhi ukwenza izenzo ezinhle singenamali - umsebenzi sasivumela eyisicefe. Awu, mhlawumbe kanjalo ... Kodwa omunye uzakuthi: uphikisana, uthi, izulu amnandi etendeni! Maye, njengoba umkhuba imibukiso, konke amazwi nje, kodwa empeleni ... "Lapho isidingo liqhumise emnyango, uthando basinda ngefasitela!" Ngubani akazi lokhu kuhlakanipha abantu? A kuyimpi okusinda cishe njalo kuholela ukushabalala uthando, kungakhathaliseki ukuthi okumsulwa futhi usentekenteke kungenzeka ekuqaleni.
Ukuthenga imizwa - hhayi lokhu madness?
Ukuphendula umbuzo ngalokho imali ayinakukuthenga, abaningi basho uthando nobungane. Kodwa lokhu debatable. "Kunzima ukuthanda noma maqondana bum, isiphukuphuku" - ngakho uthi inengi. Nakuba ekuqaleni kwakunzima ukuntula imali kungabangela eduze futhi ubuhlobo onothando. Kodwa ngokushesha kakhulu othandweni "umsizi" ukhathele njalo edabukisayo isaka ezezimali, silondoloze isiphukuphuku aqukethe Umuntu oyisiphukuphuku futhi engenangqondo.
Yiqiniso, ungasiza umuntu akulona ngempela eyimpumelelo ezingeni kahle eliphezulu futhi komoya emzimbeni, futhi ngokuya impahla. Kodwa, futhi, lokhu kuzosiza kakhulu imali. By the way, ngisho indoda ngokwanele kuvikelwe, ungakwazi ugqozi wena uthando, usebenzisa hhayi kuphela izindleko ezingokomoya kodwa futhi. Ngokwesibonelo, ukuhlola umhlaba lakhe elingaphakathi, izidingo zakhe futhi ukudala ababemzungezile kakhulu ipharadesi, lapho ephupha. Khona-ke ungakwazi futhi ushintshe yena, ne ngisho ngaphandle. Phela, ukuhlinzelwa ubuhle kalula kwenziwe imali.
Ngakho ngempela lanamuhla nokuchuma emhlabeni konke? Basho kanjani ukuthi injabulo ayikwazi othengwe ngemali? Kodwa indaba enjengaleyo zenzeka ngaso sonke isikhathi, ngeke ukuthi lesi sitatimende.
Emkhayeni owodwa, nengane yomfana, amvusayo uNkulunkulu wakhetha nje uhlelo olugcwele: walinika ubuhle, ekuhlakanipheni, eziphiweni onazo, impilo, umphefumulo okumsulwa nephakeme. Kodwa imali umndeni wakhe akakunikanga.
Kwesinye umndeni, bacebe ngokwanele ukukhanyisa indodana untalented lopsided, ohlushwa migraines. Abazali imali eningi imali ukuhlinzwa kokulungisa ukubukeka phesheya belashwa ikhanda kusukela besebancane ukuze baqashe othisha abazosiza nothisha abanamakhono. Ngenxa yalokho, le nsizwa isibe impela, izifundiswa, umuntu ezithakazelisayo, kutholakale intombazane enhle, umsebenzi okuthandayo, kwaba umshado uphumelele futhi ujabulise.
Lo mfana evela emkhayeni ompofu kwaba isinde: kusukela esemncane wayenawo wemfanelo wokusebenza ngokuzikhandla. Ngokweqile, babamba inkunzi kuye wobuhle nempilo, ithalente kanye ayikwazanga phendla kunokushoda kwezimali wenze ngawo athukuthele futhi avoidant. Bese Isiphelo sakhe kulula ukudweba: okufanayo umfazi omubi, zinakekela izingane ezigulayo, nathemba nobumpofu.
Ubani owayephakathi lucky? Yiqiniso, uma benikezwe inkululeko yokukhetha ubuntu baba abampofu kakade yobudala emaphakathi, kanti isiguli nabantu ugly ithole ithuba ukuze belaphe futhi bagomele ukuthuthukiswa, ubumbe kakade, indaba obekungaba ngesiphetho esihlukile.
Ngakho, imali akusho ukuxazulula konke, kodwa eziningi. Kubalulekile inombolo yabo kuphela futhi isikhathi lapho avele umuntu. Futhi isiphetho ukuthi umuntu ekhula ebuntwaneni ajabula ngayo kufanele uthole konke okudingayo. Musa zibhukude ukweqisa nentokomalo, kodwa musa ubuhlungu ngenxa yobuphofu yithemba. Ubumpofu akekho ikwenza ujabule, kodwa futhi nemcebo - hhayi umbandela injabulo.
Kubalulekile kakhulu ukuthola ukusetshenziswa ofanele ngemali. Ngisho ukuhlonipha ungakwazi 'bathenge', uma inakekelwa, isibonelo, kwi engenayo lezintandane wabo noma indawo izilwane abangenamakhaya, ukushicilela izincwadi abalobi abanamakhono, ukwakha amasonto kanye izinkulisa khulula. Nokho, ungase ubuze ukuthi inhlokodolobha waqongelela ngo ... ezifana akudingeki ukuqaphela kanye nenhlonipho kulabo esebenzisa izenzo ezinhle uzama kuhlawulelwe izono wenziwa misdeeds eziningi ngaphambili.
Akumangazi ukuthi kungani abantu iphindwa: "Uqaphele akhokhe futhi, uhloniphe - ebusheni bakhe." Lokho udumo akunakuthengwa mali.
Ubuza umbuzo ongafuni mpendulo - kuyinto ekhululekile kudivayisi wesitayela
Teleology - a ... ontology Nenkolo
Emfanekisweni zefilosofi ngokuphila nokuhlakanipha
Imishini enamandla, enamandla kakhulu
Udizili ukushisa ugesi: izinhlobo, izici, isabelo. Heat-generator Ukushisa emoyeni
"Glade engumhlanganyeli" (uBryansk) - inkumbulo yezizukulwane ezinomusa
Mayelana kanjani ukuze uthumele imali "Beeline", MTS neminye
Sezimbali asters. Ukwenza izandla zabo